बेल्ट Sander Makita 9404: निर्दिष्टीकरण, फोटो र समीक्षा
कुनै न कुनै मशीनिंग वा सामाग्री, संरचना र नाजुक समाप्त Stripper प्रदर्शन गर्न आवश्यक विशेष सामना सतहहरु काटन पछि। परंपरागत, समान सञ्चालन संग सामना मास्टर स्यान्डपेपर को काम सतह को उपयुक्त विशेषताहरु संग। त्यहाँ stripping लागि हालतमा अन्य उपकरण छन्, तर खत्म त्रुटिपूर्ण कवरेज सिद्धान्त घर्षण सतह आज यसको सान्दर्भिकता खुलिरहेको छ। यो विधि काम र जापानी Makita Sander स्वतः 9404। पीस, Grouting, सामान्य सफाई र विभिन्न सतह चमकाने प्रदर्शन को लागि उपयुक्त एक उपकरण।
मोडेल बारेमा सामान्य जानकारी
पहिलो र मुख्य, एक उपकरण पीस लागि टेप मिसिन को श्रेणी मा समावेश। डिजाइन, एक आधार तलवों र रोलर्स लागि प्रदान भएको काम विमान को आन्दोलन। आफ्नो प्रतियोगिहरु फरक कम्पनीहरु Makita बेल्ट Sander अवरोध को वरपर मा सामाग्री प्रशोधन गर्न सक्ने क्षमता छ कारण जो एक मुख्य विशेषताहरु को। साथै, कारण गुरुत्वाकर्षण को कम झूट केन्द्र, नमुना एक योग्य सन्तुलित प्रदर्शन, काम को प्रक्रिया मा प्रयोगकर्ता सँगैको, श्रम सुविधा जो देखाउँछ। प्रतिस्थापन टेप छिटो हुन्छ र सजिलो, फेरि, यो सुविधा समय र अपरेटर को शारीरिक प्रयास बचाउँछ।
तर, एक प्रतिनिधि टेप प्रविधि रूपमा यो एकाइ बेफाइदा छन्। कि स्थान नै यो मामला मा प्रसंस्करण को सिद्धान्त पुग्न गाह्रो ठाउँमा सञ्चालनका कार्यान्वयन लागि प्रदान गर्दैन भन्ने तथ्यलाई। यस्तो उद्देश्यको सोझो Grinder सबैभन्दा अनुरूप हुनेछ, जो, प्रसंगवश पनि जापानी निर्माता को लामबद्ध मा प्रस्तुत छ लागि।
कम्पनी हात-आयोजित शक्ति अझ बढी ध्यान गर्न मिसिन को प्रदर्शन तिर यस मामला सजिलै देखिने पूर्वाग्रह मा, Ergonomics र कार्यक्षमता प्रतिबद्ध छ हुनत। यो तल देखाइएको यसको प्राविधिक विशेषताहरु द्वारा पुष्टि:
शक्ति उपकरण - 1010 वाट।
गति नियन्त्रण - बिजुली संचालित।
वेब चौडाई - 100 सेमी।
टेप लंबाई - 61 सेमी।
परिक्रमा गति - प्रति मिनेट 210 440 गर्न मीटर देखि।
वजन - 4.7 किलो।
आयाम - 41x20x17 सेमी।
केबल लम्बाइ -5m।
दुर्भाग्यवश, उच्च प्रदर्शन र बौद्धिक डिजाइन सुरक्षाको आधुनिक साधन र उपयोगिता ईन्जिनियरिङ् स्तरवृद्धि गर्ने सुविधाहरू द्वारा समर्थित छैन। विशेष, Makita मिसिन 9404 प्रदान र शक्ति एकाइ को तात्दै विरुद्ध नरम सुरु सुरक्षा छैन। सञ्चालन समयमा स्थिर उपकरण गति कायम गर्न यति महत्वपूर्ण नसक्नुको, तर यो विकल्प लामो देखि प्रतिस्पर्धा कम्पनीहरु थुप्रै परिवारलाई मा अनिवार्य भएको छ। तैपनि, जापानी आनंद से अलग विचार लायक छन् कि अन्य लाभ चकित।
मोडेल सुसज्जित लामो र जटिल अपरेसन प्रदर्शन को प्रक्रिया मा एक ठूलो मद्दत छ एक स्वचालित बेल्ट को, केंद्रित संग। सधैं उपकरण को नै सटीक नियन्त्रण मापदण्डहरू स्थिति संग लामो समय को लागि प्रयोगकर्ता सक्छन् - यो मामला मा एक विशेष पङ्क्तिबद्ध मा आउँछ। Makita 9404 जो पनि अपरेटर थकित प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ एक उपकरण र सहज पकड, सुसज्जित छ। र इलेक्ट्रनिक्स कार को उपस्थिति बस फरक सामाग्री संग काम गुणस्तर को मामला मा व्यवस्थापन गर्न सजिलो, तर पनि प्रभावकारी छैन बनाउँछ। प्रशोधन र काठ र ढुङ्गा, प्लास्टिक र धातु गर्न उत्तरदायी। प्रत्येक खाली नियन्त्रण प्रणालीको लागि बेल्ट को अधिकतम तीव्रता चयन गर्न अनुमति दिन्छ। नवाचारै एक ग्रेफाइट सब्सट्रेट प्रयोग गर्न श्रेय गर्न सकिन्छ। एउटै समारोह संग तत्व प्रयोग गरिएको छ, र अन्य निर्माताहरु, तर ग्रेफाइट ट्यूब कारण जापानी दृढ र पर्याप्त भएको पीस बेल्ट को सेवा जीवन वृद्धि।
अन्य उपकरण अनुकूलता
उपचार गरे सामाग्री को कणहरु को तितरबितर रोक्न, उपकरण डिजाइन को बाट पाइप एकीकृत गर्न कनेक्टर लागि प्रदान गर्ने भ्याकुम क्लिनर को निर्माण। धूलो झोला को व्यास 28 मिमी छ। यो नोट महत्त्वपूर्ण छ भनेर हुँदा पनि प्रदूषण मामिला जहाँ गर्दैन, यो विकल्प प्रयोग आन्तरिक घटक र उपकरण घटक को धूलो सुरक्षा कारण हुनुपर्छ सडक, काम। यो वैक्यूम क्लीनर Makita कम्पनी, यो संशोधन मा बेल्ट Sander organically पारस्परिक जो प्रयोग गर्न मनमोहक छ। विशेष, सिफारिस मोडेल 406 वा 431, सजिलै सहायक नली मार्फत काम गरिरहेको उपकरण जडान गर्न सकिन्छ जो। को एडप्टर मोडेल 420 र 420s को धूलो कलेक्टर श्रृंखला जोडिएको छ बिना।
Makita 9404 को लागि उपभोग्य
यो उपकरणको लागि मुख्य आपूर्ति एक पीस बेल्ट छ। सञ्चालन सदस्य चयन गर्दा यसको कार्य र graininess अनुपात मूल्याङ्कन गर्न महत्त्वपूर्ण छ। प्रत्येक टेप एक बन्द-घन्टी आकार, कागज वा कपडा साँघुरो जाले द्वारा गठन गरिएको छ जो छ। मुख्य सञ्चालन सदस्य Makita 9404. ग्रेफाइट एकमात्र साधन रूपमा घर्षण सेवा आपूर्ति को एक कोटिंग प्रदान प्रत्येक टेप को सतह, तर यदि आवश्यक यसलाई विस्थापन वा काग को एक समान घटक अद्यावधिक हुन सक्छ। यो प्लेट, मेशिन डिजाइन सम्पर्क मा घर्षण कम गर्न टेप मा स्थापित छ जो। साथै व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण ब्रांडेड पन्जा, मास्क र चश्मा Makita खरिद गर्न सिफारिस गरिएको छ। उपकरण पर्याप्त नकारात्मक कारक को सञ्चालनको एक किसिम बाट सुरक्षित छ हुनत, सुरक्षा को लागि विशेष सामान प्रयोग superfluous हुने छैन।
पहिलो हामी टेप तनाव गुणस्तर जाँच गर्न आवश्यक छ। कि पछि धूलो झोला जडान र सुरक्षित रूपमा grinders गर्न fastened। उपकरण शुरू उपयुक्त बटन थिचेर बुझे हुन्छ, र नै तरिका सञ्चालन रोकियो छ। सामान्यतया समयमा सञ्चालन प्रयोगकर्ता जो परिवर्तन आवश्यक धेरै गति, रोजगार छैन केवल भौतिक आधारमा पीस विधिहरू परिवर्तन गर्न, तर पनि विभिन्न तह विशेषताहरु उत्पादन गर्न। परिक्रमा दायरा प्रति सेकेन्ड 3.5 7.3 गर्न क्रांतियों देखि फरक हुन्छ। गति परिवर्तन विद्युतीय प्रणाली मार्फत बनेको छ। Makita 9404 मात्र पूर्ण इन्जिन मा गर्नुपर्छ प्रयोग पीस प्रत्यक्ष कार्यान्वयन सेट आवृत्ति सेट। तपाईं त बिस्तारै एकाइ काम सतहमा, कस आफ्नो शरीर धारण कम गर्न सक्नुहुन्छ। मा बेल्ट को सम्पर्क सतह पुग्नु र कार बिस्तारै उपचार गर्नुपर्छ फिर्ता र निस्कने सार्न jerks बिना।
शक्ति दक्षता कायम राख्ने यसको निर्माण, थकित-बाहिर तत्व को नवीकरण को नियमित जाँच कनेक्शन आवश्यक र कार्बन ब्रश को प्रतिस्थापन प्रदर्शन। कार्य को काम उपकरण को अन्त पछि प्रत्येक समय यो एक निस्क्रियगर्दै मोड मा काम गर्न केही समय दिने, धूलो देखि साफ गर्नुपर्छ। उपकरण निर्माता मर्मत गर्न जटिल सर्जरी को व्यवसायीक विश्वास गर्न सुझाव, तर धेरै अवस्थामा भागमा Sander विशेष, यो पट्टियाँ, पैड र अन्य सामान बुझाउँछ, आफ्नै टिप्न गर्न सक्नुहुन्छ। अधिकतम धीरज मिसिन राख्ने, मोटर अधिभार बचा र भण्डारणको लागि नियम पालना हुनुपर्छ।
धेरै प्रयोगकर्ताहरू अनुसार, उपकरण कार्यक्षमता को मामला मा र सञ्चालन मापदण्डहरु को मामला मा पर्याप्त र सन्तुलित छ। यो पीस प्रक्रिया मालिक उत्पादनहरु को एक विस्तृत विविधता पूरा। विशेष मा, मोडेल नै राम्रो पीस ढोका, बोर्ड, countertops, फर्श, स्टक्को र अन्य सतहहरु र सामाग्री प्रदर्शन। यो उत्पादन मा के गुणस्तर आवश्यक छ कुरा छैन। यो पीस उपकरण बिन्दु-र अस्तर को व्यावसायिक परिष्करण, र बगैचा बाटाहरू को कुनै न कुनै कूचो लगाउनु प्रदर्शन गर्न सक्छन्। Ergonomics लागि जाँदा, धेरै धूलो कलेक्टर को सञ्चालनको सुविधा, लामो कर्ड, गति अवस्था र पर्याप्त हल्ला इन्सुलेशन समायोजन को संभावना याद गर्नुहोस्।
विपक्ष उपकरण सञ्चालनको पक्षमा विभिन्न भेटिए। उदाहरणका लागि, एक ठूलो संरचनात्मक ठूलो र वजन उपकरण छ। यो अस्पष्ट विशेषताहरु, ठोस सामाग्री वजन संग काममा रूपमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्, तर कहिले काँही उनि असुविधाको गर्छन्। यो nuance मास्टर जसको काम रिक्त स्थान सीमित मा संरचना को प्रक्रिया समावेश जोड दिइएको छ। तर यस्तो अवस्थामा, सीधा grinders टेप भन्दा राम्रो, मोडेल वा निर्माता बिना copes। पनि समावेश मिसिन कमी मामला को अभाव उल्लेख गरे। र यो यन्त्र बस भण्डारण र यातायात लागि विशेष उपकरण हो जो अन्तर्गत धेरै धनी प्याकेज बन्डल छ भन्ने तथ्यलाई बावजुद।
मोडेल विकासकर्ताहरूले हात उपकरण, बहुमुखी उत्पादक र प्रयोग गर्न सजिलो दुवै हुन सक्छ पुष्टि गरेका छन्। घरेलू बजार Grinder मा Makita परिमार्जन 9404 14-15 हजार लागि औसत मा उपलब्ध छ। RUB। यो पनि खातामा उपकरण र प्रिमियम निर्माता को जटिलता लिएर, एक एकदम उच्च मूल्य ट्याग छ। तर प्राविधिक र परिचालन गुणस्तर यो मूल्य स्तर अनुरूप। साथै, उच्च मूल्य श्रेणी मा समान विशेषताहरु र विश्वसनीयता को नै डिग्री संग पीस लागि मिसिन पाउन कठिन हुनेछ। अर्कोतर्फ, यो साधन व्यावहारिक पनि प्रविधि यस प्रकारको को बजेट मा उत्पन्न नगर्ने आपत्तिजनक कमीकमजोरी, धेरै छ। नरम-सुरु र सुरक्षा थर्मल को अभाव ध्यान दिनुहोस् यसलाई Suffice।
बरफ (आन्तरिक दहन इन्जिन): सामान्य विशेषताहरु, प्रजाति
सजावटी पर्खाल परिष्करण लागि संरचनात्मक रोलर
घर को लागि एक पानी सर्किट संग बयलर: समीक्षा
आफ्नै हातले Compost पिट - एउटा सजिलो बचत गर्न बाटो
ट्रयाक्टर-माउन्ट ग्याँस बयलर: योजना, यन्त्र, स्थापना, जडान, समीक्षा
सिमेन्ट प्लास्टर "मूल कुराहरू": विशेषताहरु, प्रकार र मूल्यांकन
सुसमाचार - यो के हो? कसरी शब्द व्याख्या गर्न
रक्सी कलेक्टर। "Ararat Dvin" - एक उत्कृष्ट विकल्प
Epochal वर्ष। इवान डरलाग्दो शासन
कविता Tsvetaeva "मातृभूमि" को विश्लेषण
MTZ-921: विनिर्देशों, वर्णन र समीक्षा
हामी भोजन को सही शैली चयन गर्न प्रयास गर्नेछ